5 အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း!
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 29 ဇွန်လ 2022
တိုင်းနီးပါး ကုန်စည် တန်ဖိုးကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ၊ ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ပုံစံဖြင့် ရောင်းဝယ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေတ်ကာလအစကတည်းက သဘာဝဒြပ်စင်များနှင့် လူသားတို့ပြုလုပ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Bitcoin ကဲ့သို့ cryptocurrencies သည် ကမ္ဘာကြီးကို မုန်တိုင်းဖြင့် သိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလောကသည် အပိုင်းအစတစ်ခုကို လိုချင်သည်မှာ သဘာဝကျပါသည်။ ထို့ကြောင့် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုသည် အလွန်ရေပန်းစားလာပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများသည် လက်လီရောင်းချသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား ရေပန်းစားလာသော်လည်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတစ်ခုအနေဖြင့် cryptocurrencies ၏တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများစွာရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဤနေရာ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အဓိက ကစားသမားအချို့ကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါတွင် ထိုသံသယစိတ်မှာ မရှိတော့ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာကာသနှင့်ထိတွေ့ရချင်လျှင်, သင်သည်သင်၏အမိန့်ကို execute အဖြစ် cryptocurrency စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များကိုပူဇော်နိုင်မယ့်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းလိုအပ်ပါတယ်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စူးစမ်းလေ့လာသည်။ 2022 ၏အကောင်းဆုံး cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ.
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင် cryptocurrency ကုန်သွယ်သည် cryptocurrencies လဲလှယ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအယူအဆသည်စတော့ (ချ်) သို့မဟုတ် Forex trading နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ယနေ့တွင်၊ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော cryptocurrencies အများအပြားရှိသည်။ သို့သော်လည်း အထင်ရှားဆုံး ဒင်္ဂါးပြား နှစ်ခုမှာ ဖြစ်သည် Bitcoin နှင့် Ethereum. Cryptocurrencies အများစုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain နည်းပညာတစ်ခုစီတွင် မတူညီသော မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့၏ အလားအလာသည် ငွေကြေးဈေးကွက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ပုံစံမျိုးစုံနှင့် လူများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု အခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ အရွယ်အစား။
cryptocurrencies အရောင်းအ ၀ ယ်၏စက်ရုပ်များသည်အခြားသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၏နောက်ကွယ်မဟာဗျူဟာများသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အကြောင်းမှာ cryptos သည်အခြားကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များသို့သက်ရောက်သောလှုပ်ရှားမှုများ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးအခြေအနေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ဗြိတိန်ပေါင်အပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုသို့မဟုတ် cryptocurrencies အပေါ်ဥပဒေပြုပိတ်ပင်မှုအဖြစ်အချက်များမှာကြည့်သောအခါ - သော တတျနိုငျသ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောထိုအကြွေစေ့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရပ်တည်ချက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Cryptocurrency Trading Trading Platforms ဆိုတာဘာလဲ။
cryptocurrency trading platform သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား cryptocurrency trading တွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်ဤ cryptocurrencies ကိုစာရင်းဖွင့ ်၍ ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် crypto ကိုသင်ရောင်းလိုသည်ကိုသင်သိသောအခါကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ၎င်း၏ မူရင်းပုံစံဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ cryptos များသည် လုံးဝဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို သင်၏ crypto ပိုက်ဆံအိတ်တွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ အခြားရွေးချယ်မှုမှာ ကုန်သွယ်မှုကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ CFDsပိုင်ဆိုင်ခွင့်မယူဘဲ သင်ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency ကို အရှည် သို့မဟုတ် အတိုချုံ့နိုင်စေမည့်၊
cryptocurrency ကုန်သွယ်ဆဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္toအတွက်အတော်လေးအသစ်ဖြစ်သကဲ့သို့, သင်တိုင်းကုန်သွယ်မှု site ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သငျသညျ cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် truest ပုံစံအတွက်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ချင်လျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောသင်ဆန္ဒရှိလျှင် ကုန်သွယ် CFDs များမှတဆင့် cryptocurrencies, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သော FCA နှင့် CySEC ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်လိုင်စင်ရဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ် site များမရှိ။
သမားရိုးကျ အရစ်ကျစနစ် အလုပ်လုပ်ပုံကဲ့သို့ပင်၊ သင်သည် သင်ရွေးချယ်ထားသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် အခကြေးငွေနှင့် ကော်မရှင်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှုဆိုက်အပြင် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအပေါ် မူတည်သည်။ သို့သော်၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ ကုန်သွယ်မှုတွင် ကော်မရှင်ခလုံးဝပေးဆောင်သည့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများကို ရှာဖွေရန် ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။
Cryptocurrency Trading Sites များ၌သင်အဘယ်ကြောင့်ကုန်သွယ်သင့်သနည်း။
cryptocurrency နယ်ပယ်တွင် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူမှုရရှိနိုင်သော်လည်း၊ ရွေးချယ်သည့်အခါတွင် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပိုမိုရှိပါသည်။ CFD ကုန်သွယ် ဆိုဒ် တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဤကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်သင့်အားအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ အခြားဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများပေါ်တွင်ဆက်လက်ရောင်းဝယ်နေစဉ်သင်ကံကောင်းပါစေ crypto ကိုကြိုးစားလိုပါကအခြေခံနှစ်ခုစလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည့်ကုန်သွယ်ရေး site ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤတွင် CFD crypto ပွဲစားနှင့်အတူကုန်သွယ်၏အားသာချက်များကိုအချို့မှာ:
CFD များကို အသုံးပြု၍ အရှည်နှင့် အတို နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရွေးချယ်မှု။
လည်ပတ်မှု 24 နာရီ။
အမျိုးမျိုးသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပလပ်ဖောင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်မှု။
တစ်ဖက်တွင် cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်သည်စွန့်စားရမှုဟုယူဆရသည်။ သင် cryptocurrency နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစက်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံး၏နှံ့နှံ့စပ်စပ်အသိပညာရှိသည်မဟုတ်လျှင်, ဒါဟာအမြတ်အစွန်းရန်အတော်လေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရံဖန်ရံခါတွင်လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများသည် cryptocurrencies ၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးနှုန်းများကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းကိုသတိရပါ။
Cryptocurrency Trading Trading Platforms အမျိုးအစားများ
ယခင်ကဏ္တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနေရာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြစ်သောရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် CFD အရောင်းအ ၀ ယ်နှစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
၁။ Cryptocurrencies ပိုင်ဆိုင်ခြင်း
ကုန်သည်များသည် အမြဲတမ်း ဝယ်ယူ၍ ရနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင် cryptocurrencies နောက်ပိုင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အနာဂတ်တွင် စျေးနှုန်းတက်မည်ဟု မျှော်လင့်ပြီး စျေးကွက်အတွင်း ရေရှည်လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ရှုနေကြသည်။ cryptocurrencies သည် အသက် 11 နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် တန်ဖိုးအဆများစွာတိုးရန် အပြုသဘောဆောင်သော ဦးတည်ချက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဤကိစ္စတွင်သင်သည် ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလက်ခံပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ဤအရာများသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပြိုကျခြင်းကြောင့်သင့်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုက်ဆံအိတ်များသည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဟက်ကာများကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သင်အထူးဂရုပြုရပေမည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကသင်၏ cryptocurrencies ကို hardware ပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းထားရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော်လည်း၎င်းသည် Bitcoin နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနည်းငယ်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ သင်မကြာခဏကုန်သွယ်ရန်မျှော်လင့်ပါကသင်ပိုမိုထိရောက်သောပိုကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာလိုအပ်တယ်။
CFDs မှတဆင့် Cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်
cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားဒင်္ဂါးများကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲ cryptocurrency ကိုသင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်စာချုပ်များ - CFDs ဟုလူသိများသော၊ စာချုပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည့်အချိန်တွင်စျေးနှုန်းကွာခြားမှုကိုသင်အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။
Cryptocurrency CFDs များသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော်လည်း CFDs များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်သောအခါတွင် ကုန်သွယ်ခြင်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်မည့်အစား ဒင်္ဂါးပြားများ၏တန်ဖိုးကိုသာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နေပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က Bitcoin ကိုထင်ဟပ်နေသည်။ အမြတ်အတွက်ရောင်းဖို့ဒင်္ဂါးကိုဝယ်မယ့်အစား, စျေးနှုန်းမြင့်မားသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်အကြွေစေ့၌သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ CFD များအသုံးပြုခြင်း၏သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်တစ်ခုမှာသင်သည် cryptos များကိုလည်းတိုတောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုဒင်္ဂါးပြားကိုပိုင်ဆိုင်မယ့် CFDs မှတဆင့်ကုန်သွယ်အားပေး။
Cryptocurrency Trading Trading Platforms တွင်ငွေသွင်းနည်း။
မကြာသေးမီအထိ၊ fiat ပိုက်ဆံမှတဆင့် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်သည်မဖြစ်နိုင်လုနီးပါးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိန်းညှိပွဲစားများနှင့် အထူးခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ဦးသည် စည်းကြပ်မှုမရှိသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများကို ချဉ်းကပ်ပြီး လိမ်လည်လှည့်စားမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ၊ cryptocurrency လုပ်ငန်းသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်မြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် fiat ငွေကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အကူးအပြောင်းများကို အထောက်အကူပြုရန် လုံခြုံသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ အခြားကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင် အပ်ငွေအကောင့်ရှိခြင်းသည် သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ရရှိနိုင်သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများတွင် ဘဏ်ကတ်များ၊ ပြည်တွင်းဘဏ်ငွေလွှဲမှုများ၊ ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် e-Wallets များပင် ပါဝင်ပါသည်။ Skrill, PayPal ကနှင့် Neteller.
သင်ကမ္ဘာပေါ်၌မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေငွေသွင်းရန်နှင့်ထုတ်ယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သို့သော်ငွေပေးချေမှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင်ငွေအနည်းငယ်ပေးရမည်။ ထို့အပြင်အချို့ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အကောင့်ထဲတွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်လည်းလိုအပ်သည်။
Crypto ကုန်သည်များသည် ၀ န်ဆောင်ခအတွက်အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရငွေကောက်ခံသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမလုပ်မီသတိထားရမည့်အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ သငျသညျ cryptocurrency ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း၏ကျယ်ပြန့်အများစုမှာတွေ့လိမ့်မည်သည့်သွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားမှုအဖြစ်တွက်ချက်သည်။ cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်လျှင်သင် CFDs မှတဆင့်ကုန်သွယ်လျှင်သာပြန့်ပွားစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
သင်သည် cryptocurrency တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုက်တွင် အကောင့်ဖွင့်ပါ။
မင်းက $50,000 နဲ့ ဝယ်မှာ။
ရောင်းရန်မှာအမှာစာကို ၅၁၀၀၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ဤငွေပေးငွေယူ၏ပျံ့နှံ့မှုပမာဏသည် 2% ဖြစ်သည်။
သင်ဤကုန်သွယ်မှု၌ပင်ချိုးဖျက်ဖို့ပဲဒီငွေပေးငွေယူအနည်းဆုံး 2% အမြတ်အစွန်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုမပျောက်စေနိုင်သောတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုပေးသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသင်လိုချင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ ကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက် ကော်မရှင်ကိုလည်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခု၏ အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကော်မရှင်များကို ကောက်ခံသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဝယ်ယူခြင်းအပြင် ရောင်းခြင်းအတွက် ကော်မရှင်ခပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်ကို ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုပြီး ပမာဏသည် ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးအပေါ်အခြေခံသည်။
သင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုက်တွင် ကော်မရှင်နှုန်းထား 1% ရှိသည်။
သင် $100 တန် Bitcoin ကိုဝယ်သောအခါ၊ သင်သည် $1 ကောက်ခံလိမ့်မည်။
တူညီသော Bitcoin ကို $200 ဖြင့်ရောင်းသောအခါ၊ သင်သည် နောက်ထပ် $2 ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်သည် စုစုပေါင်း $3 ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းအတွက် ကော်မရှင်ခ စုစုပေါင်း XNUMX ဒေါ်လာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးသည်။ အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်ပါကစုစုပေါင်းပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်သည့်အခကြေးငွေကိုသင်ပေးရမည်။
ထိုအချက်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်သုညအခကြေးငွေကောက်ခံသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုရှာဖွေရန်မခက်ခဲပါ။ လူကြိုက်များသောပွဲစားများသည်ကော်မရှင်၏နှုန်းထားများကိုလည်းလျစ်လျူရှုထားသဖြင့်အဓိကအားဖြင့်သင်စဉ်းစားရန်လိုသည်။
မည်သည့် Cryptocurrencies များကို သင် ရောင်းဝယ်နိုင်သနည်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဈေးကွက်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသော cryptocurrencies ကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းသည် Bitcoin ၏အောင်မြင်မှုအပြီးတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်အများအားဖြင့် alt-coins ဟုလူသိများသည်။ Bitcoin နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် alt-coins များသည်အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်ဟုယူဆကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကုန်သွယ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် Ethereum, Ripple နှင့် Stellar Lumens ကဲ့သို့သောဒင်္ဂါးများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။ ဒီ alt-coins တွေဟာအန္တရာယ်များတဲ့အမျိုးအစားတွေထဲကိုပါ ၀ င်လာတာကြောင့်သူတို့ကိုသင်ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။
Cryptocurrencies Short- ရောင်းနည်း?
အစောပိုင်းကကျနော်တို့ CFDs မှတဆင့် crypto တိုတောင်းသောအရောင်းရဆုံးဖြစ်နိုင်သောကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲကျဆုံးခြင်းမှအမြတ်အစွန်းရရန်မျှော်လင့်ကာ၊
cryptocurrency CFD ပလပ်ဖောင်းတွင် ခေတ္တခဏ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပုံကို သရုပ်ပြကြပါစို့။
Bitcoin နှုန်းထားများ မကြာမီ ကျလာမည်ဟု သင်ထင်မြင်ယူဆပါသည်။
အရင်ဆုံး သင့်ပွဲစားနဲ့ အရောင်းအမှာစာတင်ပါ။
မင်းကို $10,000 နဲ့ရောင်းတယ်။
Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည် 2% ကျဆင်းသွားသည်။
$10,000 ၏ရှယ်ယာတွင်၎င်းသည်အမြတ် $ 200 သို့ပြန်ဆိုသည်။
သင့်အမြတ်အစွန်းကို သော့ခတ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်မှထွက်ရန် သင်က အမှာစာတစ်ခုတင်ပါ။
လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမပိုင်ဆိုင်မီရောင်းချခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ CFDs မြင်ကွင်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်။ တစ်နည်းဆိုရသော် CFDs ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်းတို့အားပထမ ဦး ဆုံးရောင်းချရန်အတွက် cryptocurrency ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစား၊ သင်သည်၎င်း၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုသာမှန်းဆနေကြသည်။
Bitcoin နှင့်တူ cryptocurrencies ကူးသန်းရောင်းဖို့ရှာဖွေနေပိုပိုပြီးလူများဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေဝေးလာပြီရှိပါသည်နှင့် Ethereum။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ cryptocurrency ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သြဇာရှိစေသည်။ သင် CFD များမှတဆင့်ကုန်သွယ်မှသာလျှင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သောသြဇာအတိုင်းအတာသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်သင်ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency trading platform ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် cryptocrency ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်မည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသိသာစွာသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောစည်းမျဉ်းများသည်လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကြီးမားသောကုန်သွယ်မှုပြုခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်စေရန်တားဆီးထားသည်
5:1 ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်သည်ဟု ပြောပါ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အပ်ငွေစာရင်းရှိသင်၏ငွေပမာဏအား 5x နှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်မှာလက်ကျန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရှိမယ်ဆိုရင်သြဇာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာဒေါ်လာ ၅၀၀ လောင်းကြေးနဲ့ကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူအမြတ်အစွန်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းတိုးမြှင့်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
မြင့်မားသော စွမ်းအားကို လိုချင်ပါက၊ ၎င်းတို့ကို ပေးဆောင်နေသည့် စည်းကမ်းမဲ့ ပွဲစားများကို အမြဲတွေ့နိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ကုန်သည်များအတွက်၊ leverage နှင့် cryptocurrencies နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပါ၀င်သော မြင့်မားသောအန္တရာယ်များကြောင့် သေစေမည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ငွေသားနှင့် မခွဲထုတ်မီ စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဝင်အထွက်ကို သေချာလေ့လာပါ။
Cryptocurrency Trading Trading Platforms များသည်မည်မျှလုံခြုံမှုရှိသနည်း။
Cryptocurrency သည် ဟက်ကာများထံမှ လုံးဝလုံခြုံသည်မဟုတ်သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို ဘယ်သောအခါမှ လျစ်လျူမရှုနိုင်ပါ။ ဟက်ကာနှင့်ပတ်သက်သည့် ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်အချို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို ပြန်ဆပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ထိုနေရာရှိ ပွဲစားတိုင်း၏ ကိစ္စမဟုတ်ပါ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသင်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းသည်သင်အလေးအနက်ထားစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကထိန်းညှိထားသောပလက်ဖောင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါကသင့်အားအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပါက၊ FCA သြစတြေးလျအတွက်အသိအမှတ်ပြု ASICနှင့် ဆိုက်ပရပ်စ်တို့က CySEC. လိုင်စင်တစ်ခုကိုင်ဆောင်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်တစ်ခု၏ ဂုဏ်သတင်းကို သေချာပေါက် တိုးစေသည်။
စည်းမျဉ်းများအပြင် CFD မဟုတ်သောပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင် cryptocurrency ကို၎င်း၏ truest ပုံစံဖြင့်ဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည် - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက် 100% တာဝန်ရှိသည်။
အပူ vs. အအေးသိုလှောင်
သင်၏ cryptocurrencies ကိုအအေးသိုမဟုတ်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ Hot storage ဆိုသည်မှာသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ အအေးခန်းသိုလှောင်ခန်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပူပိုက်ဆံအိတ်များတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသော်လည်းအအေးပိုက်ဆံအိတ်ပိုမိုလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအအေးသိုလှောင်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားသည့်ကုန်သွယ်ရေးနေရာတစ်ခုကိုသင်ပိုလိုချင်သည်။ ဒါကသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပြင်ပလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုကနေကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။
များစွာသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အချက်နှစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့ပြောင်းသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကောင့်ကိုသင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ နောက်သင့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သို့နောက်ထပ်အကာအကွယ်တစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုက်ကို log in လုပ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်သင့်ဖုန်းမှာတစ်ကြိမ်တည်းစကားဝှက်ကိုသင်ရလိမ့်မည်။
multisig account များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုခွင့်ပြုသည့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်ရန်ပုံငွေများကိုရယူရန်လက်မှတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ Multisig သည်ငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့်ငွေသွင်းရန်အတွက်လျှောက်လိမ့်မည်။
ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစာဝှက်သည့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များကိုသင်ရှာဖွေလိုသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်သိမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ဟက်ကာများဖြစ်သဖြင့်သင်၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
Cryptocurrency Trading Platform ကိုစတင်အသုံးပြုနည်း
အချို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်အတွေ့အကြုံရှိသူများအဖို့, cryptocurrencies သို့စွန့်သင့်ရဲ့အစုစုကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုထည့်သွင်းဆိုလိုပေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစပြုသူအနည်းငယ်ပို။ အကူအညီလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်ယနေ့ cryptocurrency trading site တွင်မည်သို့စတင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်မည်နည်းကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။
သငျသညျရှိသည့်အခါ ပလက်ဖောင်းရာပေါင်းများစွာ ရွေးချယ်ရန်၊ မည်သည့်ပွဲစားသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်သည်ကို သိရန် ပို၍ခက်ခဲလာသည်။ သင်ရှာနေသည့် အသွင်အပြင်မျိုးနှင့် မည်သည့်ဆိုဒ်သည် သင့်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ကိုက်ညီကြောင်းကို ဦးစွာရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ ကုန်သွယ်မှုပုံစံ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ သင်သည် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု အခကြေးငွေများ နှင့် ရရှိနိုင်သော ဖောက်သည် ပံ့ပိုးမှုတို့ကို ပေးဆောင်သော စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်အကူအညီထပ်မံလိုအပ်ပါကလမ်းညွှန်၏အဆုံးမှာ ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းစတင်ရန်ပထမအဆင့်မှာသင်၏သက်ဆိုင်ရာ site တွင် account တစ်ခုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးရမည်။
သို့သော်၊ အရောင်းအဝယ်စတင်ရန်အတွက်၊ ဆိုက်သည် သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဦးစွာအတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်။ လိပ်စာအထောက်အထားနှင့်အတူ အစိုးရမှထုတ်ပေးသော တရားဝင်အထောက်အထားကို ပေးဆောင်သင့်သည်။ အချို့သောဆိုဒ်များသည် လိပ်စာအထောက်အထားအဖြစ် အငှားဘဏ်ရှင်းတမ်းများ သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှုဘေလ်များကို လက်ခံပါသည်။ သင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် သင်သည် ပလပ်ဖောင်းနှင့် ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကို အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
cryptocurrency platform တိုင်းသည်သင့်အကောင့်ထဲသို့ကုန်သွယ်ငွေအရင်းအနှီးထည့်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားသည်သင်၏အမှာစာများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုသေချာစေသည်။ သင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုကိုသင်ငွေထည့်နိုင်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ပေါ် မူတည်၍ သင့်အနေဖြင့် fiat-to-crypto နှင့် crypto-to-crypto ပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနပြုမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးပါကသင်ချက်ချင်းကုန်သွယ်မှုစတင်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သည်မှာမည်သည့်စုံတွဲကိုသင်ရောင်းလိုသည်နှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အကြွေစေ့များကိုတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်ဝယ်ယူပါက၊ ဝယ်ယူထားသော cryptocurrency ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်သင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒင်္ဂါးများကိုထို site ၏ပိုက်ဆံအိတ်များတွင်သိမ်းဆည်းလိုကြသည်။ သို့သော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကြောင့်ဤအရာကိုမထောက်ခံပါ။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်သို့သင်၏ဒင်္ဂါးပြားများကိုထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် လိုက်နာရန် အဆင့်များ ရှိပါသည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုက်တွင် ငွေထုတ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ငွေထုတ်အပိုင်းတွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်၏လိပ်စာကို မိတ္တူကူးထည့်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း၏အပြောင်းအလဲအချိန်ပေါ်မူတည်။ cryptocurrencies မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအတွင်းသင့်အကောင့်ထဲမှာဖြစ်သင့်သည်။
သင် CFDs များမှတဆင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်နေပါကသင်သည်မည်သည့်ဒင်္ဂါးများကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်စွမ်းရည်မရှိပါက၊ သင်ကန်ထရိုက်များမှတဆင့်ကုန်သွယ်နေစဉ်မည်သည့်ဒင်္ဂါးများလဲလှယ်ခြင်းကိုမခံရပါ။
Cryptocurrency Trading Trading Platform တွင်မည်သည့်အရာကိုရှာရမည်နည်း။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ အချို့သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော CFD ဆိုဒ်များဖြစ်သော်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်၊ အချို့သည် cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုသည်။
မည်သည့်ရွေးချယ်မှုဖြင့်မဆိုသင်ရွေးချယ်ရန် (CFD ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ် cryptocurrency လဲလှယ်မှု) ကိုသင်လက်မှတ်မထိုးမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်။
ကုန်သွယ်ဘို့ရရှိနိုင် cryptocurrencies အမျိုးအစားများ။
Leverage ကို ထောက်ခံသလား။
အခကြေးငွေအမျိုးအစား, ကော်မရှင်နှင့် ပျံ့နှံ့.
2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်း
သင်၏သုတေသနတွင်အချိန်ယူရန်အချိန်မရှိတော့ပါက ၂၀၂၀ ၏အကျော်ကြားဆုံး cryptocurrency trading platform အချို့ကိုဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပွဲစားများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးစည်းမျဉ်းလိုင်စင်တစ်ခုရှိပြီးငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များစွာကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ သင်တစ် ဦး ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနှင့်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် cryptocurrencies ကုန်သွယ်ရန်။
AVATrade -2x $200 ကြိုဆိုသောဘောနပ်စ်များ
အွန်လိုင်းအရစ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပထမဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေနှင့်၊ AVATrade သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် crypto trading ကိုလည်းခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းစင်မြင့်ကိုသင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်ခြောက် ဦး ကထိန်းချုပ်ထားပြီးသင်၏ငွေသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောလက်၌ရှိသည်။
AVATrade သည်ကော်မရှင်သုညမူဝါဒနှင့်အတူထင်ရှားသော alt-coins များစွာကိုသင်အားခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်မဆိုဘဏ်အခကြေးငွေမရှိပါ။ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနာရီနှင့်အမျှရရှိနိုင်ပြီးထို site သည်ဘာသာစကား ၁၄ မျိုးဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ 1:25 ၏သြဇာကိုရနိုင်သည်။ အီးယူတွင်နေထိုင်သောသူများအတွက် cryptocurrencies အပေါ်အများဆုံးသြဇာကို 1:25 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် MT4၊ MT5 နှင့် AVATrade ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်၊ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသည်။ ကုန်သည်အများစုသည်ရွေးချယ်နေစဉ် BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာအခြားသူများသည် crypto-cross-pairs များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်မြင်ကွင်းသည် 24/7 အခြေခံပေါ်တွင်လည်ပတ်ရုံသာမက ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်များသည် ယခုအခါ အလွန်မြင့်မားနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ရေတိုနှင့် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေစေသည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုကိုချဉ်းကပ်ရန် အဓိကသော့ချက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့် ပါဝင်သောအန္တရာယ်များကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ငွေအစစ်အမှန်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေချိန်တွင် သင်ဆုံးရှုံးနိုင်သောအရာကိုသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကြံပြုထားသည်။
ယနေ့တွင်၊ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် crypto ပွဲစားများနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုက်များ ရာနှင့်ချီရှိပါသည်။ အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းအတွက် သင်၏ရှာဖွေမှုကို စတင်ရန် အခြေခံအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသောအချက်များအားလုံးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို cryptocurrency ဒိုမိန်းတွင် စတင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ပါ။
cryptocurrency ကုန်သွယ်မှု site ကဘာလဲ?
Cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်များ (သို့) crypto လဲလှယ်မှုများသည်သင် cryptocurrencies ကိုဝယ်ယူရန်၊ ရောင်းရန်သို့မဟုတ်လဲရန်ခွင့်ပြုသည့် website များဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အား Bitcoin နှင့်အမျိုးမျိုးသောငွေဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြားထိပ်တန်း alt-coins များကိုရရှိစေသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်အများစုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်အကောင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အနည်းဆုံးအပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်နိမ့်ကျနိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏအထိတက်သွားနိုင်သည်။
crypto အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်သောအခကြေးများကဘာလဲ
အရောင်းအ၀ယ်ဆိုဒ်များသည် ၎င်းတို့၏ အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံတွင်လည်း ကွဲပြားပါသည်။ အချို့ဆိုဒ်များက သင့်အား ကော်မရှင်ခနှင့် ဖြန့်ကြက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အချို့ဆိုဒ်များက ကော်မရှင်များကို သုညဖြင့် ပေးဆောင်ကာ ပုံသေပျံ့နှံ့မှုပုံစံဖြင့်သာ ကောက်ခံပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် cryptocurrencies ကိုပိုင်ဆိုင်ပါက၊ အခကြေးငွေများတွင် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်နှင့်အတူ အပ်ငွေနှင့် ငွေထုတ်ခများ ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ CFD များမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အားအပ်ငွေအခကြေးငွေများသို့မဟုတ်ကော်မရှင်များပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် cryptocurrency ကုန်သွယ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ?
သင်ကကုန်သွယ်ရေး site ကို၎င်း၏ website ကတဆင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိထွက်ရှာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် CFDs များမှတဆင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်နေပါက၊ ထို site သည် FCA, CySEC သို့မဟုတ် BaFin ကဲ့သို့သောအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှလိုင်စင်ယူထားသင့်သည်။ ပွဲစားများတွင်လိုင်စင်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်ဤအလောင်းများ၏အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Cryptocurrency ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များသည်အလျင်အမြန်ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူစေရန်အကောင့်တွင်အရင်းအနှီးအသင့်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ် e-wallets စသည့်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ငွေပေးချေမှုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ငွေထည့်နိုင်သည်။
သင် cryptocurrencies သြဇာအပေါ်ကုန်သွယ်ချင်လျှင်, သင် CFDs မှတဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှိသည်။ ရရှိနိုင်သောသြဇာအကန့်အသတ်ကိုတည်နေရာ၊ ၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကုန်သွယ်မှုတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပွဲစားမှချမှတ်ထားသောတစ် ဦး ချင်းမူဝါဒများကဆုံးဖြတ်သည်။ cryptocurrencies နှင့်အခြားဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများအတွက်သြဇာကန့်သတ်လည်းကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, CFD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သူနှစ် ဦး စလုံးရှည် - ရောင်းနှင့်ရေတိုရောင်း cryptocurrencies ခွင့်ပြုပါတယ်။